रुकुम समाचार – MeroJilla.com
रुकुमका दर्जन घर पहिरोको जोखिममा Saturday, August 18th, 2018
ज्ञानु गौतम रुकुम - रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा ९ न्यालिबजारका आधा दर्जन स्थानीयका घर पहिरोको जोखिममा रहेका वताएको छ । उक्त स्थानका कुलबिर बुढाथोकि, अतिराम बुढाथोकि , शसिराम बोहरा, गोरख बोहरा लगाएतका घर जोखिममा रहेको वडा अध्यक्ष महेश स्वर्णकारले जानकारी दिनुभयो । गए राती परेको अविरल वर्षाका कारण कुलबिर बहादुर बुढाथोकिको घर पहिरो उच्च जोखिममा परेको छ । माथिबाट..
चर्कियो सदरमुकाम आन्दोलन पूर्वी रुकुममा Saturday, January 27th, 2018
दाङ/रुकुम , १३ माघ । ‘कान्छो’ जिल्ला पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम फेरबदल गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ । रुकुमकोट सदरमुकाम तय गरिएको यो जिल्लाको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १२ स्थित गोलखाडा भन्ने गाउँलाई तय गर्नेगरी सरकारले बिहीबार निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयलगत्तै रुकुमकोटमा आन्दोलन थालिएको छ । बिहीबार राति नाराबाजी गरेका..
पश्चिम रूकुमका दुईवटा मतदान केन्द्रमा मंसिर १५ गते पुनः मतदान गर्ने अायाेगकाे निर्णय Tuesday, November 28th, 2017
काठमाण्डाैं, १२ मंसिर । निर्वाचन आयोगले रुकुम पश्चिमका दुईवटा मतदान केन्द्रमा मंसिर १५ गते पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिम रुकुमको बाँफीकोट गाउँपालिका–५ को रुत्न मावि काँडा मतदान केन्द्र (क) मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली र आठबीसकोट नगरपालिका–११ को नेपाल राष्ट्रिय मावि गत्तसैना मतदान केन्द्र (ख)मा समानुपातिक निर्वाचन..
भोट माग्न पुगेका काँग्रेसका उम्मेदवारले सुत्केरीको ज्यान बचाए Thursday, November 23rd, 2017
रुकुम, ७ मंसिर । सुत्केरी बेथाले घरमै ग्रस्त पश्चिमकी एक महिलाको ज्यान नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारले बचाएका छन् । काँग्रेस रुकुम पश्चिममा प्रदेश सभा ‘ख’ का उम्मेदवार खड्कबहादुर डाँगीले त्रिवेणी गाउँपालिका–४ की मीना केसीको ज्यान बचाएका हुन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण घरमै सुत्केरी बेथा शुरु भए पनि उनलाई स्वाथ्य चौकी पु¥याउन समस्या भएको थियो । उम्मेदवार डाँगी..
रुकुम ,०७ मंसिर । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालमा कम्युनिष्ट शासन आए जनताले अन्याय भयो भनेर भन्न नपाउने बताए । नेपाली कांग्रेस पश्चिम रुकुमले आयोजना गरेको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले संसारबाटै कम्युनिष्ट शासन हराउँदै गएकोे ठोकुवा गरे । रुसको माक्सवाद र लेलिनवादी सिद्धान्त र चीनको कम्युनिष्ट शासन प्रणालीमा कम्युनिष्ट..
रुकुममा एक व्यक्तिले आफ्नै साथीलाई बन्चरो प्रहार गरी हत्या Friday, April 21st, 2017
रुकुम ८ वैशाख । यहाँ एक व्यक्तिले आफ्नै साथीलाई बन्चरो प्रहार गरी हत्या गरेका छन् । जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका–१४ का निर्मल सार्कीले सोही ठाउँका ४५ वर्षीय अकलबहादुर खड्काको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुकुमले जानकारी दिएको छ । बुधबार खड्का र सार्कीले सँगै रक्सी सेवन गरेको र त्यसैक्रममा सामान्य विवाद हुँदा सार्कीले आफ्नै घरमा खड्कामाथि बन्चरो र सापल प्रहार..
रुकुमको रुघामा लाठीले हिर्काएर मारे श्रीमती र सासु Tuesday, July 19th, 2016
रुकुम, ४ साउन । रुकुमको रुघा गाविस–५ का जगतबहादुर खड्काले आज बिहान आफ्नै श्रीमती र सासुको कुटपिट गरी हत्या गरेका छन् । सामान्य विवाद हुँदा खड्काले श्रीमती नौमति खड्का र सासु ओपी ओलीको हत्या गरेकत्रो प्रहरीले जनाएको छ । खड्काकी सासु ओपी केही दिनअिघ मात्र छोरीको घर आएकी थिइन् । अभियुक्त खड्काले लाठीले हिर्काएपछि घटनास्थलमै दुवैको ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ । सासु र..
नुवाकोट र रुकुमका बजेट रु दुई–दुई अर्ब Tuesday, March 15th, 2016
नुवाकोट २ चैत । जिविस नुवाकोटले आगामी आव २०७३÷७४ का लागि करिब रु दुई अर्ब पाँच करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तेइसौँ जिल्ला परिषदले गरेका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब १९ करोड ४५ लाख ११ हजार र चालुतर्फ रु ८६ करोड ६९ लाख १९ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । परिषद्ले सन् २०१६ भित्र जिल्लालाई खुला दिसामुक्त..
सिंगो रुकुम प्रदेश नं. ५ मा पर्नुपर्ने माग सहित थालिएको आन्दोलन थप उग्र बन्ने संकेत Thursday, August 13th, 2015
मनिष खड्का रुकुम - सिंगो रुकुमलाई प्रस्तावित प्रदेश नं. ५ मा पार्नुपर्ने माग सहित थालिएको आन्दोलनको स्वरुप थप कडा पार्ने आन्दोलनकारी नागरिकले चेतावनी दिएका छन् । आफुहरुले गत आइतबार देखी आन्दोलन थालेको भएपनि आज सम्म कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै बिहिबारबाट आन्दोलनलाई थप कडा पारिने अखण्ड रुकुम संघर्ष समितिले जनाएको छ । आज सम्म शान्तिपुर्ण वातावरणमा आन्दोलन संचालन गर्दा कुनै..
चट्याङ लागेर महिला गम्भिर घाईते Tuesday, February 3rd, 2015
मनिष खड्का रुकुम, माघ २० गते । चट्याङ लागेर रुकुममा एक महिला गम्भिर घाईते भएकी छिन् । आज विहान करिब साढे ११ बजेतिर परेको चट्याङ लागेर खोलागाउँ गाविस वडा नं. ६ टुनिगैरा निवासी २६ वर्षिय निर्मला ओली गम्भिर घाईते हुनुभएको हो । घरमा खाना पकाईरहेको अवस्थामा एक्कासी चट्याङ पर्दा ओलीको देब्रे खुट्टा र हातमा गहिरो चोट लागेको बताईएको छ । घाईते ओलीको खोलागाउँको जोगिनेटामा रहेको..
रुकुमका एक बावुले दिए छोरा सरह छोरीहरुलाई पनि जग्गा Thursday, January 29th, 2015
मनिष खड्का रुकुम, माघ १५ गते । रुकुम मग्गाका एक व्यक्तिले आफ्ना छोरीहरुलाई पनि छोरा सरह पैतृक सम्पति प्रदान गरेका छन् । मग्मा ३ वाउँनवाराका ५९ वर्षिय खम्बे खत्रीले ४ छोरीहरुलार्ई ७ सय ४० वर्ग मिटरका दरले जग्गा प्रदान गर्नुभएको हो । खत्रीका बिवाहित छोरीहरु मनिषा खत्री, खड्का, थुममाया खत्री, यशोदा खत्री र अविवाहित छोरी भुममाया खत्रीले आफ्ना दाजुभाईले पाए बरावरको अंश प्राप्त..